युनिटीका मोस्ट वान्टेडहरु सशस्त्र संघर्षमा | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← साप्ताहिक मोडल
पारस गोलीकान्डको ‘पिपली लाइभ’ →
युनिटीका मोस्ट वान्टेडहरु सशस्त्र संघर्षमा
फलानो जिल्लाको सदरमुकाममा आज आक्रमण भएको छ। आक्रमण सरकारले मोस्ट वान्टेड घोषणा गरेको युनिटीका सशस्त्र विद्रोहीहरुले गरेका हुन्।
अब यस्तै समाचार आउने दिन आउँछ रे। ’cause नेपालको एउटा न्युज च्यानल न्युज२४ हिजोदेखि यही प्रोमो बजाउँदैछ- युनिटी सशस्त्र विद्रोहको तयारीमा। भारतमा र नेपालको तराई क्षेत्रमा तालिम दिन थालिएको छ।
हजारौँ जनताको पैसा नेटवर्किङको नाममा ठगेर बेपत्ता भएकाहरु टेलिभिजनको पर्दामा खुलेआम अन्तर्वार्ता दिँदै विद्रोहको धम्की दिइरहेका छन्। अनि टेलिभिजन च्यानल त्यसलाई स्कूप समाचार ठानेर जानाजानी ती ठगहरुको ‘ल्यापडग‘ बन्दैछ। पक्कै पनि युनिटी कान्डमा फलोअप जरुरी छ। ’cause केही माथिल्ला निकायका अधिकारीहरु पैसामा बिकेका छन् र युनिटीका दोषीहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन। कारबाही प्रक्रिया सुस्त गतिमा छ र हातमुख जोरेर खाने निर्दोषहरुको जसोतसो गरी कमाएको पैसा फिर्ता दिइएको छैन। तर, त्यसो भन्दैमा राज्यविरुद्ध हतियार उठाउने धम्कीलाई टेलिभिजनको पर्दामा देखाएर कुन चाहिँ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्दैछ मिडिया ?न्युज२४ का पत्रकार पत्रकारिताको महान् धर्म निर्वाह गर्दै।
नेपालको कुन कानुनले सशस्त्र विद्रोहको धम्की दिने समूहको समाचारलाई सञ्चारमाध्यमबाट फैलाउन अनुमति दिइएको छ ? के प्रेस स्वतन्त्रताको नमूना यही हो ? यो त निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा पत्रकारहरुले जुलुस गर्न जानु र प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन् भयो भन्दै नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता खत्तम अवस्थामा रहेको भन्दै आइएनजीओहरुलाई रिपोर्ट पठाएको जस्तो भएन र ?युनिटीले छापामार समूह गठन गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति त केही अगाडि नै आइसकेका थिए, जसमा उनीहरुविरुद्ध लेख्‍नेलाई सफायाको धम्की दिइएको थियो। तर त्यो कसैले छापेन। अहिले भने टेलिभिजन नै त्यसको प्रचार गर्न अघि बढेको छ।
पत्रकारिताका गुरु लालदेउसा राई भन्नुहुन्थ्यो क्लासमा- प्रेस स्वतन्त्रता भनेको विष्णु भगवान हैन। यो निराकार, निरामय हुँदैन। यसका पनि केही निश्चित सीमा हुन्छन्, यसले पनि केही दायित्वको अनुभव गर्नुपर्छ। चीनले गरेको इन्टरनेट सेन्सरलाई मानवअधिकारको हनन् ठान्ने अमेरिका आफै अहिले विकिलिक्स साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै हिँड्नु परेको अनुभवले पनि देखाउँछ- प्रेस स्वतन्त्रता देश अनुसार परिभाषित हुन्छ। जे मन लाग्यो त्यही गरिहिँड्ने छाडापन प्रेस स्वतन्त्रता हैन।छानबिनै नगरी जे भन्यो त्यही देखाउनु र समाजमा आतंक फैलाउनु पत्रकारिता हो ?
युनिटीका काशिराम गुरुङ लगायतका मालिकहरु अझै पनि प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचिमा छन्। उनीहरु राज्यले खोजिरहेका अभियुक्तहरु हुन्। यदि उनीहरुले आफूलाई निर्दोष ठान्छन् भने कानुनी रुपमा त्यसको सामना गर्नुपर्थ्यो। लुकेर मिडियालाई प्रलोभन दिएर सशस्त्र विद्रोहको धम्की दिने हैन। केही अघि एउटा साप्ताहिक पत्रिकाले समाचार छापेको थियो- युनिटीवालाहरु एक हातमा पैसाको मुठो र अर्को हातमा युनिटी सञ्चालकको अन्तर्वार्ताको टेप बोकेर टेलिभिजन च्यानलहरु धाइरहेका छन्। विश्वास लागेको थिएन समाचारको। तर त्यसको केही दिनमा नै एभिन्युज टेलिभिजन र न्युज२४ टेलिभिजनमा युनिटीका भगौडा सञ्चालकहरुको अन्तर्वार्ता देख्‍दा दालमा केही कालो हैन दालै कालो देख्‍न बाध्य भइयो।
न्युज२४ ले हिजोदेखि बजाइरहेको यो प्रोमो हेर्नुस्- जसमा माओवादीले त जम्मा कति संख्यामा विद्रोह सुरु गरेको हो, सबैलाई थाहा भएकै हो। हामी त सुरु मै १०/२० हजारबाट गर्छौँ भनेर काशिराम गुरुङले मुसुमुसु हाँस्दै भनेका छन्। भारत र तराई क्षेत्रमा तालिम सुरु भएको भनी जनतालाई तर्साइएको छ। के तपाईँलाई लाग्छ यस्तो सामाग्री टेलिभिजनमा प्रसारण हुनु ठीक हो ? आफ्नो विचार राख्‍नुहोला।
my sansar bata
Posted by agnibana on डिसेम्बर 6, 2010 in Uncategorized
2 responses to “युनिटीका मोस्ट वान्टेडहरु सशस्त्र संघर्षमा”
डिसेम्बर 13, 2010 at 9:02 बिहान
सरकार लाइ के चाहिएको हो युनिटिको पैसा
तुरुन्त सरकारले आफनो निणय फिर्ता गरनुपरछ
के नेपाली जनता तिनि होइनन
कारबाहि गरनु छ भने घुस खाइ महल ठडाएका लाइ हेर
अब बिकास देशमा हुन लाग्यो भनि युनिटि लाइ के तेसो गरनु मिलछ
तु फिरता गर सरकार निरणय
जनवरी 4, 2011 at 6:16 बिहान
Kin bidroh ma ayeta unity ka director haru, sarkar le belai ma niyantran gare pani hunthyo ni, 4/5 crore tax khayer ab bhanjha ki thag ho bhane thag sanga tax line pani ta thag ho ra yo kura medai le out garen, media pani ta thag ho ni kaso,